Salostad Gel (ဆလိုဆတက်ဒ်ဂျယ်) - Hello Sayarwon
Salostad Gel (ဆလိုဆတက်ဒ်ဂျယ်)
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Salostad Gel (ဆလိုဆတက်ဒ်ဂျယ်)
Salostad Gel (ဆလိုဆတက်ဒ်ဂျယ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Salostad Gel (ဆလိုဆတက်ဒ်ဂျယ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Salostad Gel (ဆလိုဆတက်ဒ်ဂျယ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Salostad ဂျယ် ကို ကြွက်သားနာကျင်ခြင်း၊ ဒဏ်ဖြစ်ခြင်း၊ အဆစ်လွဲခြင်း၊ လေးဖက်နာကြောင့်နာခြင်း၊ နှာခေါင်းပိတ်ခြင်းတို့တွင် အများဆုံးအသုံးပြုကြပါသည်။
Salostad Gel (ဆလိုဆတက်ဒ်ဂျယ်) ဘယ်လိုသုံးသင့်သလဲ
Salostad ဂျယ် အားမသုံးခင် ဆေးအညွှန်းကို ဖတ်ပါ။
Salostad Gel (ဆလိုဆတက်ဒ်ဂျယ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Salostad ဂျယ် ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နှင့် စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားခြင်းက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနည်းပင် ဖြစ်သည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်ခြင်းနှင့် ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုများမဖြစ်စေရန် Salostad ဂျယ် ကို ရေချိုးခန်းတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းမျိုးတွေမပြုလုပ်ပါနှင့်။ Salostad ဂျယ် ဆေးအမျိုးအစားနှင့် ဆေးထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းသောပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အတွက် ဆေးဘူးအခွံ၌ပါသော သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရစေရန်အတွက် ဆေးဝါးအကုန်လုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့် ဝေးရာတွင်ထားပါ။)
Salostad ဂျယ် အား အိမ်သာထဲပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချတာမျိုးအား မလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးများကိုမလိုအပ်တော့သည့်အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့်အခါများတွင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ရာ အရေးကြီး၏။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ မည်ကဲ့သို့စွန့်ပစ်ရမည်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်၏ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
Salostad ဂျယ် အားရေခဲသေတ္တာထဲ၌ သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်သောကြောင့် အေးခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Salostad Gel (ဆလိုဆတက်ဒ်ဂျယ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
အောက်ပါတို့ရှိနေလျှင် Salostad ဂျယ် အား မသုံးခင် ဆရာဝန်ကို ပြောပါ။
ဓါတ်မတည့်ခြင်း – Salostad ဂျယ် ၊ ၎င်းတွင်းပါသော ပစ္စည်းများနှင့် မတည့်လျှင်၊ ထိုပစ္စည်းများကို အညွှွန်းစာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။.
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Salostad Gel (ဆလိုဆတက်ဒ်ဂျယ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Salostad Gel (ဆလိုဆတက်ဒ်ဂျယ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
တခြားဆေးများကဲ့သို့ပင် Salostad ဂျယ် တွင်လည်း ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ချို့ ရှိပါသည်။ အများစုမှာ ဖြစ်တာရှားပြီး နောက်ထပ်ကုသမှုခံရသည်အထိ မဖြစ်ပါ။ သို့သော် သင့်၌ဆေးလိမ်းပြီးနောက် ပြဿနာများ ဖြစ်လာပါက ဆရာဝန်ကိုတင်ပြရန် အရေးကြီးပါသည်။
ဘယ်ဆေးတွေက Salostad Gel (ဆလိုဆတက်ဒ်ဂျယ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Salostad ဂျယ် သည် သင်အခုသောက်သုံးနေသည့်တခြားသော ဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သော ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သော ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများ မဖြစ်လာစေရန် သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေသော ဆေးဝါးများအားလုံး၏စာရင်းကိုပြုစုထားပြီး (စာရင်းလုပ်သည့်အခါ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည်များ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေသည်များ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါရပါမည်။) ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါပဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနှင့်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Salostad Gel (ဆလိုဆတက်ဒ်ဂျယ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Salostad ဂျယ် က အစားအသောက် သို့မဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သော ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သည့် ဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန် အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Salostad Gel (ဆလိုဆတက်ဒ်ဂျယ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Salostad ဂျယ် ပမာဏမှပါတ်သတ်ပြီး ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
ကလေးတွေအတွက် Salostad Gel (ဆလိုဆတက်ဒ်ဂျယ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသက် ၂နှစ်အောက်ကလေးများအတွက် ရည်ညွှန်ပမာဏမှာ – ထိခိုက်မိသည့်နေရာကို ၃-၄ ကြိမ် နေ့စဉ်လိမ်းရပါမည်။ ကွဲရှ ပြတ်ရာများကို မလိမ်းရပါ။ မျက်လုံး သို့မဟုတ် အတွင်းအမြှေးပါးများနှင့် ထိတွေခြင်းမှ ရှောင်ပါ။
Salostad Gel (ဆလိုဆတက်ဒ်ဂျယ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Salostad ဂျယ် ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
လိမ်းဆေး 20 g လျှင် 1.6 g l-menthol and 3.0 g methyl salicylate တို့ပါဝင်ပါသည်။
Salostad ဂျယ် ကို လိမ်းဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးလိမ်းပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်လိမ်းရမည့်အချိန်နှင့် နီးကပ်နေပြီဆိုပါက လွတ်သွားသောအကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်၌ပင် လိမ်းလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏအား နှစ်ဆတိုးလိမ်းတာမျိုးမလုပ်ပါနှင့်။
Salostad gel. http://www.stada.com.vn/product/353/salostad-gel/. Accessed October, 21, 2016.
Salostad gel. http://www.mims.com/vietnam/drug/info/salostad%20gel Accessed October, 21, 2016.
Salostad gel. http://thongtinbenhvien.com/thuoc/cac-thuoc-khac/salostad-gel-thuoc-giam-dau.html. Accessed October, 21, 2016.